ခဈြစနိုးချေါနတေဲ့ “ငရုတျသီးနီလေး” နာမညျပွောငျနဲ့ ပတျသကျပွီးရှငျးပွသှားတဲ့ ဆာကာ – Sports A2Z
ခဈြစနိုးချေါနတေဲ့ “ငရုတျသီးနီလေး” နာမညျပွောငျနဲ့ ပတျသကျပွီးရှငျးပွသှားတဲ့ ဆာကာ
ယူရို ၂၀၂၀၊ အုပျစု D အဖှငျ့ပှဲစဥျ၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ပှဲမတိုငျမီမှာ အာဆငျနယျနဲ့ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျကွယျပှငျ့ ဘူကာယို ဆာကာက သူ့နာမညျပွောငျရဲ့ အဓိပ်ပါယျနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှငျးပွသှားခဲ့ပွီး ဒီနာမညျပွောငျကို ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါတှငျစခေဲ့သူက အာဆငျနယျအသငျးခေါငျးဆောငျအူဘာမီယနျးဖွဈတယျလို့ ထုတျဖျောပွောပွသှားခဲ့တာပါ။
ဒီနာမညျပွောငျဟာတော့ ” ငရုတျသီးနီလေး ” လို့ ဖှငျ့ဆိုနိုငျပွီး ဆာကာအတှကျ ဂိုးလာဘျပှငျ့စဖေို့ အထိမျးအမှတျနဲ့ အူဘာမီယနျးက အဓိပ်ပါယျရှိရှိ သတျမှတျပေးခဲ့တာဖွဈသလို ၁၉ နှဈသားအနနေဲ့ လာမယျ့ယူရိုပွိုငျပှဲမှာ အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့အတူ ငရုတျသီးတတောငျ့ရဲ့ ပူစပျပေါကျကှဲမှုအတိုငျး ပွိုငျဘကျတှေ ဂိုးတှနေဲ့ ပေါကျကှဲပွီး ပူစပျသှားစဖေို့ ရညျရှယျမြှျောလငျ့ထားကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ပေါကျကှဲအားပွငျးတဲ့ ဆာကာရဲ့ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျကို အူဘာက ဦးညှတျခဲ့ခွငျးရဲ့ အဓိပ်ပါယျအဖွဈလညျး ညှနျးဆိုနိုငျပွီး ငရုတျသီးလေးကတော့ ဒီနာမညျကို အထူးတလညျ ကွိုကျနှဈသကျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆာကာဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီရဲ့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ တနှဈတာအကောငျးဆုံးကစားသမားလညျး ဖွဈခဲ့တာပါ။
ဒါအ့ပွငျ အသငျးမှာ နရောမရှေး အံဝငျစှာ ကစားနိုငျတဲ့ သူ့ရဲ့ စှယျစုံရမှု၊ တစိုကျမတျမတျအားထုတျမှုတှကွေောငျ့ အာဆငျနယျနညျးပွအာတီတာရဲ့ တနျဖိုးအထားရဆုံး အခဈြတျောကစားသမားဖွဈလာခြိနျမှာ အင်ျဂလနျနဲ့အတူ နိုငျငံတကာမွငျကှငျးမှာ ဝငျဆံ့လာခဲ့ပွီး နညျးပွဆောကျဂိတျရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲရဲ့ ၂၆ ဦး လူစာရငျးမှာ အပွီးသတျရှေးခယျြခံခဲ့ရတာဟာ အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ အလုပျကွိုးစားလှနျးတဲ့ သူ့အတှကျ ရလဒျကောငျးထှကျခဲ့တဲ့ သကျသပေါ။
” ကြှနျတျော့နာမညျပွောငျက အူဘာကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတာပါ။ သူကတော့ ပွငျသဈလို ပွောခဲ့တယျ။ တရကျသားပေါ့…. ကြှနျတျောတို့ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဥျမှာ အဆုံးသတျပိုငျးလကေ့ငျြ့နတေုနျး သူက ဟေ့ ငရုတျသီးလေးလို့ ကြှနျတျော့ကို ဆကျတိုကျချေါနခေဲ့တယျ။ သူတခါချေါတိုငျး ကြှနျတျောကလညျး ဆကျတိုကျကို ဂိုးတှသှေငျးနခေဲ့တာပါ။ ”
” သိပျကို ပွငျးထနျအားပါတဲ့ ဂိုးတှသှေငျးနိုငျခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျောက သူ ပွငျသဈလိုပွောတာကို အဓိပ်ပာယျမေးကွညျ့တော့ ” ငရုတျသီးလေး ” တဲ့။ သူက ဒီလို ချေါပါမြားလာတော့ ကြှနျတျော့အတှကျ ကွီးမွတျတဲ့အရာတခုဖွဈလာပွီး တကယျလညျး အစှမျးထကျခဲ့ပါတယျ”
” လူတိုငျးက ကြှနျတျော့ကို အဲ့လို ချေါတှငျနကွေပါပွီ။ ကြှနျတျော အငျစတဂေရမျမှာ တငျထားတဲ့ ခြိနျးကွိုးလေး တှဖေူ့းကွတယျမဟုတျလား။ အဲဒါ ၂၀၂၀ မှာ ခယျြလျဆီးကို အနိုငျယူပွီး ကြှနျတျောတို့ FA ဘုရငျဖွဈတော့ သူက ကတိပေးထားတဲ့အတိုငျး ရတနာနဲ့လုပျထားတဲ့ ငရုတျသီးအနီတောငျ့ကို ကြှနျတျော့အတှကျ လကျဆောငျခြီးမွှငျ့ခဲ့တာပါ ” လို့ ဆာကာက ခရိုအေးရှားနဲ့ ကစားရမယျ့ ယူရိုပှဲကွိုမှာ ရငျတှငျးစကားကို ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ယူရို ၂၀၂၀၊ အုပ်စု D အဖွင့်ပွဲစဉ်၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာ အာဆင်နယ်နဲ့ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကြယ်ပွင့် ဘူကာယို ဆာကာက သူ့နာမည်ပြောင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြသွားခဲ့ပြီး ဒီနာမည်ပြောင်ကို ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တွင်စေခဲ့သူက အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်အူဘာမီယန်းဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောပြသွားခဲ့တာပါ။
ဒီနာမည်ပြောင်ဟာတော့ ” ငရုတ်သီးနီလေး ” လို့ ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး ဆာကာအတွက် ဂိုးလာဘ်ပွင့်စေဖို့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အူဘာမီယန်းက အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်သလို ၁၉ နှစ်သားအနေနဲ့ လာမယ့်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အတူ ငရုတ်သီးတတောင့်ရဲ့ ပူစပ်ပေါက်ကွဲမှုအတိုင်း ပြိုင်ဘက်တွေ ဂိုးတွေနဲ့ ပေါက်ကွဲပြီး ပူစပ်သွားစေဖို့ ရည်ရွယ်မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပေါက်ကွဲအားပြင်းတဲ့ ဆာကာရဲ့ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကို အူဘာက ဦးညွှတ်ခဲ့ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အဖြစ်လည်း ညွှန်းဆိုနိုင်ပြီး ငရုတ်သီးလေးကတော့ ဒီနာမည်ကို အထူးတလည် ကြိုက်နှစ်သက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆာကာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ တနှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားလည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒါအ့ပြင် အသင်းမှာ နေရာမရွေး အံဝင်စွာ ကစားနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ စွယ်စုံရမှု၊ တစိုက်မတ်မတ်အားထုတ်မှုတွေကြောင့် အာဆင်နယ်နည်းပြအာတီတာရဲ့ တန်ဖိုးအထားရဆုံး အချစ်တော်ကစားသမားဖြစ်လာချိန်မှာ အင်္ဂလန်နဲ့အတူ နိုင်ငံတကာမြင်ကွင်းမှာ ဝင်ဆံ့လာခဲ့ပြီး နည်းပြဆောက်ဂိတ်ရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ၂၆ ဦး လူစာရင်းမှာ အပြီးသတ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဟာ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အလုပ်ကြိုးစားလွန်းတဲ့ သူ့အတွက် ရလဒ်ကောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ သက်သေပါ။
” ကျွန်တော့်နာမည်ပြောင်က အူဘာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ သူကတော့ ပြင်သစ်လို ပြောခဲ့တယ်။ တရက်သားပေါ့…. ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ အဆုံးသတ်ပိုင်းလေ့ကျင့်နေတုန်း သူက ဟေ့ ငရုတ်သီးလေးလို့ ကျွန်တော့်ကို ဆက်တိုက်ခေါ်နေခဲ့တယ်။ သူတခါခေါ်တိုင်း ကျွန်တော်ကလည်း ဆက်တိုက်ကို ဂိုးတွေသွင်းနေခဲ့တာပါ။ ”
” သိပ်ကို ပြင်းထန်အားပါတဲ့ ဂိုးတွေသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်က သူ ပြင်သစ်လိုပြောတာကို အဓိပ္ပာယ်မေးကြည့်တော့ ” ငရုတ်သီးလေး ” တဲ့။ သူက ဒီလို ခေါ်ပါများလာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကြီးမြတ်တဲ့အရာတခုဖြစ်လာပြီး တကယ်လည်း အစွမ်းထက်ခဲ့ပါတယ်”
” လူတိုင်းက ကျွန်တော့်ကို အဲ့လို ခေါ်တွင်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော် အင်စတေဂရမ်မှာ တင်ထားတဲ့ ချိန်းကြိုးလေး တွေ့ဖူးကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါ ၂၀၂၀ မှာ ချယ်လ်ဆီးကို အနိုင်ယူပြီး ကျွန်တော်တို့ FA ဘုရင်ဖြစ်တော့ သူက ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ရတနာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ငရုတ်သီးအနီတောင့်ကို ကျွန်တော့်အတွက် လက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ ” လို့ ဆာကာက ခရိုအေးရှားနဲ့ ကစားရမယ့် ယူရိုပွဲကြိုမှာ ရင်တွင်းစကားကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
လာမယျ့ရာသီသဈမှာ အဓိပ်ပါယျမရှိ မကျြမုနျးကြိုးလှနျးလှတဲ့ စညျးမဉျြးတှကေို ပွငျဆငျလာတော့မယျ့ VAR